ကမ္ဘာ လှည့် အပျော်စီးသင်္ဘော မြန်မာ သီလ၀ါဆိပ်ကမ်း မှာ ဆိုက် ကပ်ခွင့်မပြု – Na Pann San
ကမ္ဘာ လှည့် အပျော်စီးသင်္ဘော မြန်မာ သီလ၀ါဆိပ်ကမ်း မှာ ဆိုက် ကပ်ခွင့်မပြု
Na Pann | March 2, 2020 | Local News | No Comments
ကမ် ဘာ လှည့် ခရီးသွားတွေ ပါဝင်တဲ့ NV- Silver Spirit အပျော်စီးသေ င်္ဘာကို မြန်မာပိုင်နက်ထဲ ဝင်ခွင့်မပြုဖို့ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရောဂါသ ယ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ခရီးသွားတွေပါ လာနိုင်တဲ့ အတွက် ဝင်ခွင့်မပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်ထွေးက RFA ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။
ဝင်ခွင့်မပြုဖို့ မနေ့က ညွှန်ကြားစာရောက်တယ်လို့ သင်္ဘော ဆိုက်ကပ်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ Myanmar Voyages International Tourism က ဦးသက်လွင်တိုးက ဆိုပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ သီလဝါဆိပ်ကမ်းကို မတ်လ လေးရက်နေ့ မှာ ဆိုက်ကပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ အဲဒီအပျော်စီးသင်္ဘောမှာ ခရီးသည် ၈၀၀ ကျော်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Silver Spirit ဟာ အမေရိကန် သင်္ဘောဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ နောက်ဆုံး ဆိုက်ကပ်ခဲ့ကာ အခု ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသင်္ဘောဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလက မြန်မာနိုင်ငံကို တစ်ကြိမ်ဆိုက်ကပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အပျော်စီး သင်္ဘော ဆိုက်ကပ်တာတွေကို နိုင်ငံအသီးသီးက တားမြစ်တာတွေ ရှိနေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ လကုန်ပိုင်းကပဲ ထိုင်ဝမ်က လာတဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယရှိသူတွေ ပါလာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ဟောင်ကောင်နိုင်ငံက ကမ်းကပ်ခွင့် မပြုခဲ့ပါဘူး။
ဖေဖော်ဝါရီလက ဂျပန်နိုင်ငံကို ဆိုက်ရောက်တဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်က ခရီးသည်တွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူတွေ တွေ့ရှိထားတယ်လို့ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ RFA Burmese
ကမျ ဘာလှညျ့ ခရီးသှားတှေ ပါဝငျတဲ့ NV- Silver Spirit အပြျောစီးသေ င်ျဘာကို မွနျမာပိုငျနကျထဲ ဝငျခှငျ့မပွုဖို့ ဟိုတယျနှငျ့ ခရီးသှားလာရေး ဝနျကွီးဌာနက ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ပတျသကျပွီး ရောဂါသ ယျဆောငျလာနိုငျတယျလို့ ယူဆရတဲ့ ခရီးသှားတှပေါ လာနိုငျတဲ့ အတှကျ ဝငျခှငျ့မပွုဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာလို့ ဟိုတယျနှငျ့ ခရီးသှားလာရေးဝနျကွီးဌာန ညှနျကွားရေးမှူး ဦးမွငျ့ထှေးက RFA ကိုအတညျပွုပွောပါတယျ။
ဝငျခှငျ့မပွုဖို့ မနကေ့ ညှနျကွားစာရောကျတယျလို့ သငေ်ျဘာ ဆိုကျကပျဖို့ စီစဉျနတေဲ့ Myanmar Voyages International Tourism က ဦးသကျလှငျတိုးက ဆိုပါတယျ။ ရနျကုနျမွို့ သီလဝါဆိပျကမျးကို မတျလ လေးရကျနေ့ မှာ ဆိုကျကပျဖို့ စီစဉျထားတဲ့ အဲဒီအပြျောစီးသငေ်ျဘာမှာ ခရီးသညျ ၈၀၀ ကြျောပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။
Silver Spirit ဟာ အမရေိကနျ သငေ်ျဘာဖွဈပွီး စင်ျကာပူနိုငျငံမှာ နောကျဆုံး ဆိုကျကပျခဲ့ကာ အခု ထိုငျးနိုငျငံ ဖူးခကျကို ရောကျရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။ အဲဒီသငေ်ျဘာဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ နိုဝငျဘာလက မွနျမာနိုငျငံကို တဈကွိမျဆိုကျကပျခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။ အပြျောစီး သငေ်ျဘာ ဆိုကျကပျတာတှကေို နိုငျငံအသီးသီးက တားမွဈတာတှေ ရှိနပွေီး ပွီးခဲ့တဲ့ လကုနျပိုငျးကပဲ ထိုငျဝမျက လာတဲ့ အပြျောစီးသငေ်ျဘာမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ သံသယရှိသူတှေ ပါလာတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှကွေောငျ့ ဟောငျကောငျနိုငျငံက ကမျးကပျခှငျ့ မပွုခဲ့ပါဘူး။
ဖဖေျောဝါရီလက ဂပြနျနိုငျငံကို ဆိုကျရောကျတဲ့ အပြျောစီးသငေ်ျဘာပျေါက ခရီးသညျတှမှော ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုးရှိသူတှေ တှရှေိ့ထားတယျလို့ နိုငျငံတကာသတငျးတှမှော ဖျောပွထားပါတယျ။ RFA Burmese
နေ့စဉ် အသုံးပြုနေသော ရေ နှင့် သောက်သုံးရေမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးနိုင်သလား….? ဗိုင်းရပ် ရေထဲမှာ အသက်ရှင်နိုင်သလား..?
ယနေ့ နံနက် အတည်ပြုခဲ့သော ကိုဗစ်ကူးစက် လူနာအမှတ် ( ၇၈ ) မှာ တီးတိန်မြို့ မှ သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်
လေးဂွနဲ့ ပြစ်တဲ့ အိမ်ရှင်ကို သူခိုးမှ လက်ဗစ်ဗုံးဖြင့် ပြန်ပစ်